Ciidan laga keenay Balli doogle oo lagu wareejiyay Xeradii ay ka guureen Imaaraadka - Caasimada Online
Home Warar Ciidan laga keenay Balli doogle oo lagu wareejiyay Xeradii ay ka guureen...
Ciidan laga keenay Balli doogle oo lagu wareejiyay Xeradii ay ka guureen Imaaraadka
Muqdisho (Caasimadda Online) – Afaafka hore iyo dhamaan agagaarka Xerada General Gordan ee shalay ciidamo ka wada tirsan dowlada Soomaaliya ay ku dagaalameen ayaa maanta lagu arkayay ciidamo milatari aad u tababaran oo wato gaadiidka Gaashaaman.
Mar aan saakay soo hormaray halkaasi ayaa indhaheygu qabanayeen tiro ciidan ah oo halkaasi amniga sugayo islamarkaana diidayay xitaa in ay gaagiidka dadweynaha halkaasi istaagaan.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Warbaahinta u sheegay in ciidamada Milatariga ee sida gaarka ah u tababaran lagu wareejiyay Xerada Ciidanka Jeneral Gordan ee Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada Soomaalida.
Ciidamadii Imaaraadka ee xeradan ku sugnaa, ayaa noqday kuwa la xiray iyo kuwa kala cararay, kadib dagaalkii shalay ka dhacay Xeradaasi.
Taliyaha ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya Cabdiwali Jaamac Gorod, ayaa sheegay in la soo xiray tiro askar ah oo isku dayday inay saanad Militari kala baxaan Xeradaasi.
Si kastooy ahaataba Madaxda ugu sareysa dalka ayaa si wayn uga carootay falkii shalay ka dhacay Xerada Ciidamada Jeneraal Gordan oo maalmo ka hor Saraakiisha dowlada imaaraadka carabta ay ku wareejiyeen Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.